Madagasikara: hisy ve ny fanapahan-kevitra hialana amin’ny olana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2009 19:12 GMT
(sary nalain'i Avylavitra)
Nanatratra ny faratampony ny herisetra politika nanomboka hatramin'nyvolana janoary teo tamin'ny 7 Febroary teo raha 30 raha kely indrindra ny Malagasy maty notifirin'ny tafika, tafiditra tao anaty fifanenjanana politika manko i Madagasikara. Maro ny diplaomaty avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nanao asam-panelanelanana hisian'ny fifanarahana eo amin'ny Prezidà Marc Ravalomanana asy i Andry Rajoelina, Filohan'ny Fahefana Avo ho amin'ny Tetezamita. Na dia maroaza izany asam-panelanelanana izany dia tsy nifanatrika mivantana mihitsy ny roa tonta noho ny fepetra mialoha tsy azo nifanarahana mihitsy.
19 Febroary, Nandrisika ny mpanohana azy Rajoelina haka tranona minisitera vitsivitsy ka hametraka ny minisitra notendreny hitantana ny tetezamita amin'ireo minisitera ireo. Rehefa nahomby moa ny fidiran'ny mpanohitra tamin'ireo toerana ireo, dia nalain'ny tafika indray ireo trano ireo rehefa tonga ny alina. Nanoratra fehin-tantara sy namelabelatra hanazaa tsara ny fizotry ny raharaha i Ethan Zuckerman.
Taorian'ny nianianany hitondra ny demaokrasia sy hanala ny fitondrana ankehitriny, nanaitra ny maro ny nataon-dRajoelina nanaiky hihaona amin-dRavalomanana amin'ny toerana tsy an'ny atsy tsy an'ny aroa, raha tononina dia biraon'ny iray amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM).
Taratasy misy teboka dimy no nifaneken'ny roa tonta dia ny hampitsaharana ny fifandrangitana, ny fihetsiketsehana an-dalambe, ary ny fisamborana miendrika politika, ary hifanaraka ny roa fa mbola hisy ny fifanarahana. Radio France International (RFI) moa mitatitra fa mety hatsangana ny praiminisitra vaovao hitantana ny tetezamita.
Samy manana ny heviny mikasika ny raharaha ny olona tsirairay avy. Tahaka ny nampizara telo ny firenena ity raharaha nitarazoka ity: eo ny samy manohana ny andaniny roa, ary ny fahatelo kosa manohana izay tranga talohan'ity krizy ity ihany.
Mampahatsiahy ny fakana ny minisitera sy ny nahavotsotra azy indray i Arinaina :
Nandrahona ny tafika i Andry Rajoelina fa hataony eny amin'ny lohalaharana ny vadin'izy ireo, raha vao sahisahy mitifitra vahoaka eo. Nirehareha mihitsy ny mpitarika ny TGV tamin'ny alakamisy fa nahazo minisitera efatra ry zareo: Minisiteran'ny fampianarana – minisiteran'ny atitany – minisiteran'ny filaminana anatiny – Minisiteran'ny fitsinjaram-pahefana. Vaovao ratsy anefa no azon'ny mpitokona tao amin'ny mpitolon'ny TGV ny Zoma maraina. Nolazain'ny RNM manko fa nandeha tany amin'ireo minisitera efa voalaza ny tafika, ny alina mialoha io, ka nossamboriny avokoa ny mpitolon'ny TGV niambinia ny minisitera teo. Notazonina tao amin'ny tobin'ny zandary tao Betongolo ireo nosinambotra. Ny Zoma ary, noho ny fahatezerana ve sa noho ny fahadisoam-panantenana, no nilazan'i Andry Rajoelina teo amin'ny kianjan'ny 13 mey fa hanao diabe ry zareo ny zoma ho fanohizana ny tolona.
Manasongadina ny lesona azo tsoahina avy amin'ny tantara i Jentilisa (mg):
Gazetyavylavitra indray mamehy ny tsapa fa efa lasa fotoana ela ihany izany no nisian'ny krizy (mg):
Aiky, mamaham-bolongana ao amin'ny Malagasy Miray, no miezaka mitady zavatra hafa horesahina ankoatra ny krizy rehefa avy naneho ny heviny izy tamin'ny lahatsoratra roa nialoha ny lahatsoratra nakana ny teiny etoana (fr):
Tsy misy afa-tsy resaka politika sy krizy fotsiny no resahina rehefa mitady lahatsoratra momba an'i Madagasikara. Andeha isika mba hiezaka hiresaka zavatra hafa eto amin'ny Malagasy Miray.
Soratra miverina: Meet Mamy and Zo, Editors of Global Voices in Malagasy · Global Voices
[…] been most read were those which dealt with political issues, and I think this is one of them: Madagasikara: Hisy ve ny fanapahan-kevitra hialàna amin'ny olana? (Madagascar: A Resolution to the Political […]
22 Avrily 2014, 16:48